अव पर्नु पर्दैन भारतको भर,चीन जोड्न दर्जन सडक तिव्र रुपमा निर्माण हुँदै - Enepali Online
अव पर्नु पर्दैन भारतको भर,चीन जोड्न दर्जन सडक तिव्र रुपमा निर्माण हुँदै
काठमाडौं- सरकारले चीनसँगका सीमामा सडक जोड्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको सरकारले व्यापार बढाउने रणनीतिअन्तर्गत करिब एक दर्जन नाकासम्म सडक पुर्‍याउने योजना बनाएको हो।
पाँच नाकामा दुई वर्षभित्रै सडक पुर्‍याउने योजना छ । अन्य नाकामा पनि चार वर्षभित्र सडक पुर्‍याउन काम भइरहेको छ । योजना अगाडि बढाउन उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना तयार गरेर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
चीन जोड्ने एक दर्जन नाकासम्म सडक ट्र्याक खोल्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । ‘आधा दर्जन सडकमा अहिले पनि धमाधम काम भइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अन्य सडक प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएका छौं।’
चीनसँग अहिले एउटामात्र केरुङ–रसुवागढी नाका खुला छ । भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुल्न नसकेपछि चीनबाट आयात हुने सबै सामान केरुङबाटै आइरहेका छन् । मुस्ताङको कोरला नाकासम्म सवारी पुगे पनि दुई देशबीच नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
चीनसँग जोडिएका तातोपानी, केरुङ, कोरला, किमानाथाङ्का, हिल्सा र टिंकर नाका व्यापारिक दृष्टिकोणले प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विभागले जनाएको छ । चीनसँग नाका जोड्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । ‘चीनसँग जोड्ने तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्,’ महानिर्देशक सिग्देलले भने, ‘एक दर्जन सडकमा काम भइरहेको छ।’
यो उत्तर–दक्षिण राजमार्गअतर्गत कर्णाली, कालिगण्डकी र कोसी करिडोरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्ला सिमकोटअन्तर्गत खुलाल–सिमकोट, हिल्सा–सिमकोट खण्डको लागि २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये ३ करोड सेनामार्फत र २५ करोड ५३ लाख आयोजना कार्यालयमार्फत काम भइरहेको छ ।
उत्तर–दक्षिणअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा भने स्तरोन्नति गर्न ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोसी करिडोरको बसन्तपुर–खाँदबारी–किमाथांका सडकका लागि ५३ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ ।
चीनसँगको तिप्लापास नाकामा सडक पुर्‍याउन ताप्लेजुङ–ओखलढुंगा, लप्ची नाकाअन्तर्गत लामाबगर–लप्ची सडक ,रोयलभञ्ज्याङ नाका पुग्न बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङमा पनि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । तामाकोसी–लामाबगर–चीन सिमानाको ३२ किलोमिटर सडकका लागि ३ करोड, जिरी–सल्लेरी–ढिगी तिब्बत सीमा पुग्ने ८८ किलोमिटरका लागि ४ करोड विनियोजन भएको छ।
नागरिक मा खबर छ
Previous Post Previous post: चितवनबाट प्रचण्डले गरे तिन करोड नेपालीका लागि यस्तो खुसीको कुरा
Next Post Next post: नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेझैं, नब निर्वाचित डा. बाबुराम भट्टराईले ३ करोड नेपालीलाई दंग पार्दै गरे एक्कासी यस्तो घोषणा, के भट्टराईले साँच्चिकै गर्लान् त ?
पुरानो नोट बेचौ लखपति बनौं ! यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा बढी छ ! अन लाईन बाट यसरि बेच्न सकिन्छ पुरानो नोट ।
परमानन्द झाले भारतमा भने: नेपाल मागिखाने देश हो, जसले दिए पनि हात थाप्छ